विज्ञान प्रविधि | Pennepal
Home विज्ञान प्रविधि
काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको प्रकोप विश्वभर फैलिरहँदा यसको औषधि समेत बन्न सकिरहेको छैन । परीक्षण गरिएको औषधि र खोपको नतिजा आउँन पनि १ देखि २ महिना लाग्न सक्ने बताइएको छ । औषधि र खोप नै पत्ता नला...	Read more
एजेन्सी । क्यालिफोर्नियाको मरुभूमिमा आफैँले बनाएको रकेटमा अन्तरिक्ष जान खोजेका एक अमेरिकीको मृत्यु भएको छ। पागल उपनाम राखेका ६४ वर्षीय माइक ह्यूजको वाष्पशक्तिबाट चल्ने रकेटमा अन्तरिक्ष जान ख...	Read more
एजेन्सी । उत्तेजक पहिरनमा फेसबुक लाइभ गसरसामानहरूको विज्ञापन तथा बिक्री गर्ने कार्य कम्बोडिया सरकारले रोक लगाएको छ । तर सरकारको यस्तो कदमलाई महिला अधिकारवादीहरूले खरतनाक र आधारहीन भएको आरोप...	Read more
posted on: February 21, 2020 No Comments
एजेन्सी । सुरुवाती कम्प्युटरका ‘आइकन’ ल्यारी टेस्लरको ७४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । अधिकांश मानिसको पहुँचबाट कम्प्युटर टाढा रहेको समयमा ल्यारीले सन् १९६० को शुरुवातदेखि सिलिकन भ्यालीमा काम...	Read more
posted on: February 13, 2020 No Comments
एजेन्सी । सान फ्रान्सिस्को । फेसबुकको स्वामित्वमा रहेको ह्वाट्सआपका प्रयोगकर्ता दुई अर्ब भन्दा बढी पुगेको फेसबुकले बुधबार जनाएको छ । मेसेन्जरझैं सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने ह्वाट्सआपलाई अझ बढी...	Read more
दक्षिण कोरियाको दिग्गज टेक कम्पनी सामसङले आफ्नो ग्यालेक्सी एस२० सिरिज सार्वजनिक गरेको छ । सान फ्रान्सिस्कोमा आयोजित ग्यालेक्सी अनप्याक्ड इभेन्टमा तीन स्मार्टफोन ग्यालेक्सी एस२०, ग्यालेक्सी ए...	Read more
posted on: February 11, 2020 No Comments
एजेन्सी । सबैको छालाको रंग एउटै भए कति जाति हुन्थ्यो होला हगि ? कम्तिमा छालाको रंगकै आधारमा मानिस–मानिस बीच भेदभाव त हुने थिएन होला । यो त मीठो कल्पनाको कुरा भयो, व्यवहारमा यस्तो सम्भव हुँदै...	Read more
विश्व चर्चित व्यक्तिहरूले धमाधम किन छाड्दैछन् फेसबुक ?
posted on: February 06, 2020 No Comments
एजेन्सी । विश्व चर्चित अमेरिकी साहित्यकार स्टेफन किंगले आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट बन्द गरेका छन् । फेसबुकमा राजनीतिक विज्ञापनका रूपमा गलत जानकारीहरूको बाढी आएको र त्यसले आफूलाई असहजता महसुस गराएक...	Read more
यो हो संसारकै विषालु विरुवा
posted on: February 05, 2020 No Comments
एजेन्सी । संसारकै सबैभन्दा विषालु विरुवा अस्ट्रेलियामा पाइने गिम्पी गिम्पीलाई मानिन्छ । यो विरुवालाई ‘सुसाइड प्लान्ट’ भनेर पनि चिनिन्छ । यसको पातहरु हाम्रोतिर पाइने सिस्नोजस्तै मसिनो पोल्ने...	Read more
posted on: February 02, 2020 No Comments
एजेन्सी । सन्देश आदानप्रदानका लागि विश्वभरि प्रयोग हुने ह्वाट्स्एप अब लाखौँ स्मार्टफोनमा नचल्ने भएको छ। पुरानो अपरेटिङ सिस्टम अर्थात् सञ्चालन प्रणाली भएका एन्ड्रोइड फोन र आईफोनमा अब फेसबुकको...	Read more